Zinedine Zidane oo hal arin darteed u diiday inuu ka hadlo wararka ku aadan Paul Pogba – Gool FM
Zinedine Zidane oo hal arin darteed u diiday inuu ka hadlo wararka ku aadan Paul Pogba
(Spain) 04 Maajo 2019.Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa kasoo hor muuqday shir jaraa’id kahor kulanka horyaalka La Liga ay Axada kula ciyaari doonaan Villarreal garoonka Santiago Bernabeu.
Macalinka reer Frace oo dhowr su’aalood ee quseeya kooxdiisa Real Madid lagu dhex weydiiyay shirka jaraa’id uu kasoo muuqday ayaa si toos ah kaga jawaabay,
Ugu horeyn Zinedine Zidane ayaa ka hadlay kulanka ay la ciyaari doonaan kooxda Villarreal wuxuuna yiri:
“Waa inaan sii wadnaa, waa fursad kale oo aan ku ciyaari karno kulan wacan, waxaan xiiseeneynaa inaan ka ciyaaro dhulkeena, iyo taageerayaasheena hortooda’”.
“Wuxuu ahaa xilli ciyaareed aad u adag, kulanka Villarreal marwalba waa mid aad u adag, waxaa muhiim ah inan diyaar u noqono, koox kasta waxay dooneysaa inay wax uun sameyso marka ay kahor timaado Real Madrid”.
“Waxaa inoo harsan saddex kulan, waxaan isku dayi doonaa inaan ku dhameysano qaabka ugu fiican ee suurtogalka ah, waan fiicanahay waxaan doonayaa inaan badiyo islamarkaana si wacan u ciyaaro”.
“Waxaa dhici doono isbadal xili ciyaareedka soo socda, laakiin ciyaartoy badan ayaa sii joogi doonta kooxda, waxaan ka shaqayn doonaa inaan dib ugu soo noqno wadadii aan ugu guuleysan lahayn koobab”.
Intaas kadib macalinka reer France ayaa wax laga weydiiyay wararka xanta ah ee lala xiriirinayo Real Madrid saxiixa Paul Pogba wuxuuna jawaab kaga dhigay.
“Waxaan u sheegay inuu yahay ciyaaryahan wanaagsan, sida kuwa kale, mana ka hadlin isaga, sababa la xiriira ixtiraam aan u hayo kooxda Manchester United”.
Lionel Messi oo xaday Saddex Mitir (Metre) ka hor inta uusan Liverpool ka dhalin Laadkii Xorta ee Cajiibka ahaa....+SAWIRRO